I-China Runjin © Krunt ™ -EX800 I-extrusion kanye ne-Slicing Line ye-Ice Cream Ukukhiqiza nefektri | Runchen
I-Runjin © Krunt ™ -EX800 Umugqa Wokuqothula Nokusikwa Kwe-Ice Cream
Runchen © Expro ™ -EX800 isetshenziselwa ukwenza u-ayisikhilimu wohlobo lwe-extrusion nohlobo lokugcwalisa u-ayisikhilimu, futhi ibuye isetshenziselwe ukuhlobisa nokuqinisa imikhiqizo ye-ayisikhilimu. Izinhlobo eziguqukayo zemikhiqizo ka-ayisikhilimu zingakhiqizwa ngemishini yokusiza.
Izinhlobo zomkhiqizo ezingakhiqizwa:
- Umkhiqizo oxhunywe ngentambo - umkhiqizo we-strip - u-ayisikhilimu / inkomishi - ucezu - vimba - isemishi - ikhekhe elincane
Okujwayelekile Runchen © Expro ™ -EX800 ulayini we-ayisikhilimu we-extrusion wakhiwe ngohlelo lokuphindisela emuva lwethreyi lomkhiqizo kanye nokugcina okokuqandisa okusheshayo. Ukungena / ukuphuma komkhiqizo kusethwe ngaphambili kwesitoreji samakhaza esheshayo futhi kuxhunywe kupulatifomu yomsebenzi, kwakheka uhlelo lokudlulisa luyindilinga. Ifreyimu yesiteshi ejwayelekile ifakiwe epulatifomu yomsebenzi ukukhipha, ukugcwalisa nokuhlobisa ama-ayisikhilimu. Ngaphakathi kwesitoreji samakhaza asheshayo, iketanga lokudlulisa lisonta kumasethi amabili ozimele bensimbi engagqwali.
Njengenqubo yokuqala yokusebenza, ulayini wokukhiqiza ukhipha izinto zokusetshenziswa zama-ayisikhilimu kumathileyi womkhiqizo (njengomkhiqizo oxhunywe ngentonga, ucezu lomkhiqizo noma ikhekhe elincane), noma ugcwalisa izinto zokusetshenziswa zama-ayisikhilimu kuzigaxa ezisatshalaliswe ngaphambilini . Amayunithi wokusebenza ahlukene asetshenziselwa imikhiqizo ehlukile enjengedivayisi yokuxhuma induku, idivaysi esabalalisa amabhisikidi, idivaysi yokuhlafuna ushingamu, ukugcwaliswa kwesigaxa esimise okwibhola, u-ayisikhilimu ohlotshiswe ebusweni, i-caramel, ujusi, ujamu noma izithelo ezomisiwe. Ngemuva kwalokho, amathreyi anemikhiqizo adlulisa umhubhe wokuqandisa osheshayo futhi afriziwe ngokujikeleza komoya opholile. Ngemuva kokuthi imikhiqizo ye-ayisikhilimu ifriziwe, isandla esiwumshini sizosusa imikhiqizo emathileyi bese sicwilisa ushokoledi bese sipakisha imikhiqizo.
Uhlelo lokushayela ngamaketanga nomthombo wamandla wawo wonke amadivayisi kungxenyekazi yomsebenzi asemhubheni wokuqandisa osheshayo. Amasondo okushayela ohlelo lokudlulisa uchungechunge kanye ne-shaft enkulu yokushayela ngaphansi kwesikhulumi somsebenzi axhunywe ngqo kumandla amakhulu.
Amafreyimu wesiteshi afakwe epulatifomu yomsebenzi ukuhlomisa izingxenye ezahlukahlukene zokusebenza ukukhiqiza imikhiqizo ekhethekile. Lezi zinhlaka zesiteshi zenzelwe ukuthi zishintshane ngomunye ukukhiqiza uhlobo lohlobo lwe-extrusion noma uhlobo lokugcwalisa. Zonke izinto zangaphandle nezingxenye zepulatifomu zenziwe ngensimbi engagqwali noma izinto ezingenasici.
Umhubhe wokuqandisa osheshayo
Umhubhe wokuqandisa osheshayo we Runchen © Expro ™ -EX800 yakhiwe ngamasethi amabili wesitori esizimele esizimele. I-evaporator ne-high-velocity fan zibekwe ohlangothini lohlelo lokudlulisa uchungechunge. Ngaphakathi kwesitoreji samakhaza asheshayo, iketanga lokudlulisa lisonta kuhlaka lwensimbi engagqwali eceleni kwesitimela esihamba ngambili. Zonke izingxenye ezisekela amaketanga, amagiya wamaketanga nozimele zenzelwe ukuthi kube lula ukuzihlanza nokuzinakekela. Phakathi kobakaki wamaketanga nefeni kukhona iphaseji lokugcinwa. Umshini wokungezwani osetshenziselwa ukulungisa uchungechunge lokudlulisa ubhekisisa kahle ukwehluka kwamazinga okushisa emhubheni wokuqandisa osheshayo. Iphaneli yesitoreji yomhubhe wokuqandisa osheshayo wenziwe ngephaneli lensimbi engagqwali ene-PU ngaphakathi. Iphaneli yokugcina engezansi inikezwa ngomsele wamanzi.
Yonke imisebenzi engahleliwe kufaka phakathi ingxenye yamandla, ukugcwalisa umsebenzi nokuhlobisa indawo
ukusebenza kwe-ayisikhilimu konke kulawulwa nge-PLC kuphaneli yokulawula emaphakathi. Yonke idatha yokukhiqiza ingahlanganiswa, iphathwe futhi ilungiswe kusengaphambili kuphaneli yokulawula. Lapho ezinye izinto zixhunywe kukhompyutha ephethe, izixhobo zingalawulwa ngezinhlelo ezahlukahlukene.
Okujwayelekile Runchen © Expro ™ -EX800 kusebenza i-ammonia yokupholisa evaporator. Njengeyunithi yokuzikhethela, uhlelo lungasebenza futhi ne-Freon evaporator.
Runchen © Expro ™ -EX800 ithuluzi lokudlulisa umkhiqizo lenzelwe ngokukhethekile ukudlulisa imikhiqizo exhunywe ngenduku. Ingasetshenziselwa ukucwilisa imikhiqizo exhunywe ngenduku ngemuva kokuqina kwe-extrusion kushokoledi. Insimbi ifakwe izandla eziyi-185 zomshini nethangi lokuhambisa ushokoledi elihambayo kanye nepompo ekhethekile ejikeleza ushokoledi.
Uhlobo lomkhiqizo Ibhisikidiukusatshalaliswa Kuqondileukukhishwa Indukuukufaka Kuvundlileukusika Gumukusatshalaliswa
Intambo ixhunyiweumkhiqizo √ √ √ √
Isangwejiumkhiqizo √ √ √
Sikaumkhiqizo √ √
Uhlobo lomkhiqizo Isigaxaukusatshalaliswa Ushokolediukufafaza Okuphakathiukugcwalisa Ukugcwalisa ipeni Phezuluumhlobiso
Inkomishi eyisiyingi √ √ √
Isigaxa √ √ √ √
Ikhekhe elincane √ √
Amandla (iyunithi ngehora)
U-ayisikhilimu oxhunywe ngentambo:
Ikhekhe le-ayisikhilimu: akukho ukugqokiswa
Umthamo usekelwe emikhiqizweni ejwayelekile ka-ayisikhilimu nefomula elandelayo nokushisa okuhwamukayo okungu -45 ℃.
Gcoba i-nonfat eyimpuphuubisi Umobaushukela) I-glucose yegazi Izinto ezisizayo Okuqukethwe kwe-condensate Amanzi Ingqikithi
Umthamo wemikhiqizo yocezu ususelwa kwimikhiqizo ejwayelekile ngobukhulu obukhulu obungu-25 mm.
Umthamo wezigaxa ezincishisiwe ususelwa kwimikhiqizo ejwayelekile enobubanzi obukhulu obungu-60 mm.
Ipulatifomu yomsebenzi Ukugcinwa kwe-
I-Net isisindo kg 2,000 7,200 4,200
Gross isisindo kg 3,000 9,500 6,600
Ububanzi obukhulu m 5.41 × 1.35 × 2.7 9.1 × 2.42 × 2.9 7.71 × 2.42 × 2.9
Langaphambilini Umshini wokuqandisa weRunjin © Krunt ™ -N2000
Olandelayo: Umshini we-Runjin © Krunt ™ -RM35 Ice Cream